ထရိတ်ဒါတွေ့ဆုံပွဲနှင့် ညစာစားပွဲ အမှတ်တရများ
ဖေဖော်ဝါရီ ၃ရက်တွင် FBSသည် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးသော ထရိတ်ဒါတွေ့ဆုံပွဲတွင် - ထရိတ်ဒါများနှင့် တွေ့ဆုံကာ ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲတွင် ထိပ်တန်းထရိတ်ဒါများ၊ ကုမ္ပဏီများနှင့် အတူတကွတွေ့ဆုံကာ ထိုင်းဘူဖေးများကို သုံးဆောင်ကာ ဖျော်ဖြေပွဲများကို ခံစားအားပေးခဲ့ကြပါသည်.
အရာအားလုံးကိုမေ့သွားလောက်အောင် အားလုံးပျော်ရွှင်ခဲ့ကြပါသည်! FBS ပြပွဲသည် ထရိတ်ဒါများအတွက် FBSမှ စပွန်ဆာပေးသော KAWASAKI NINJA 250 မော်တော်ဆိုင်ကယ်အပါအဝင် အခြားဆုမဲများစွာကို မဲဖောက်ပေးခဲ့သည့်အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံမှ ထရိတ်ဒါများအကြား အလွန်စိတ်ဝင်စားခံခဲ့ရပါသည်! ထိုင်းနိုင်ငံမှ ထရိတ်ဒါများအားလုံး ကြက်သီးမွေးညှင်းထကာ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားသွားအောင် FBSက ဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုကို သိရှိရအောင် လေ့လာဖတ်ရှုလိုက်ပါ!
ပွဲတက်သူများထဲမှ Mr. Jirapat Wisetsilက ကံအထူးဆုံးဖြစ်ပါသည် - မော်တော်ဆိုင်ကယ် မဲပေါက်သွားခဲ့သူဖြစ်ပြီး ဧည့်သည်တော်များထဲတွင် အပျော်ဆုံးလူသားတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ပါသည်. သူ့ရဲ့ အိပ်မက်တွေ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ဒီနေ့ကို သူအမြဲအမှတ်ရနေလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်မိပါသည်.
ထို့အပြင် FBSသည် တက်ရောက်လာသည့် ဧည့်သည်တော်များအား ဘရုတ်ကာနှင့် မည်သို့စတင်လုပ်ဆောင်ရမည့်နည်းလမ်းများကို သင်ကြားပေးခဲ့ပြီး မော်ဒယ်များနှင့် ဆက်ဖီလ်အတူဆွဲကာ သူတို့အနေနှင့် တကယ်ငွေအစစ်ထည့်စရာမလိုဘဲ ဘောနပ်$၅၀ကို အသုံးပြုထရိတ်ဒင်းလုပ်နိုင်ကြောင်းကို ပြသပေးခဲ့ပါသည်. တွေ့ဆုံပွဲဟောခန်းတွင် FBSဈေးကွက်သုံးသပ်သူ Kritsada Sengriabမှတင်ဆက်သော အရေးပါသည့် သုံးသပ်ချက်မှတ်တမ်းများကို အတူတကွလေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ကြပြီး FBSအမှတ်တံဆိပ်ပါ အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများကို အခမဲ့ရရှိခဲ့ကြသည့်အတွက် ဧည့်သည်တော်များ အထူးပျော်ရွှင်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ကြပါသည်.
တွေ့ဆုံပွဲ၏ အကောင်းဆုံးအပိုင်းမှာ အံ့အားသင့်ဖွယ် အဖွဲ့အစည်းစိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည် - ထိုင်းနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှ တက်ရောက်သူထောင်ကျော်သည် ထရန်းများအကြောင်းကို အတူတကွဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး၊ အတွေ့အကြုံများကို ဝေမျှကာ အကောင်းဆုံးသော အမြင်များကို ရှာဖွေနိုင်ခဲ့ကြပါသည်. ကျေးဇူးပါ, ထိုင်းထရိတ်ဒါတို့ရေ, တကယ့်ကို မမေ့နိုင်လောက်တဲ့ တွေ့ဆုံပွဲပါ!
အမှတ်တရဓာတ်ပုံများကိုကြည့်ရှုလိုက်ပါ. သင့်အတွက် စိတ်ခွန်အားရရှိစေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပျော်များကို ဝေမျှပေးလိုက်ရပါသည်!